Yogurt – Healthy Life Journal
ဒိန်ချဉ်သောက်ရင် ၀မ်းပျက်/၀မ်းလျှောတယ် . .
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဒိန်ချဉ်သောက်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာအတွက်ကြောင့် ကောင်းတာလဲ။ ကျွန်တော်က ဒိန်ချဉ်သောက်ရင် ၀မ်းပျက်/၀မ်းလျှောတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ A. ဒိန်ချဉ်ထဲမှာ...
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ နည်းလမ်းတကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း
—-၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—- အလှကုန်ပစ္စည်းအများစုဟာ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကြာရှည်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ အသားအရေကို ထိခိုက်တာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရေပေါ်က အပြစ်အနာအဆာတွေ ကင်းဝေးစေဖို့နဲ့ အသားအရေ လှပအပြစ်ကင်းစေဖို့အတွက် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပျားရည် ပျားရည်မှာ...
သွားနှင့်ခံတွင်း သန့်စင်စေရန် ဒိန်ချဉ်သောက်ပါ
ပလုတ်ကျင်းခြင်း၊ သွားကြားထိုးကြိုးသုံးခြင်း စတာတွေထက် သွားနဲ့ခံတွင်းကို ကျန်းမာသန့်စင်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကတော့ ဒိန်ချဉ်သောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားနဲ့ခံတွင်း ဆေးပညာဂျာနယ်က ထုတ်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး လေးကြိမ်ခန့် ဒိန်ချဉ်သောက်ခြင်းဟာ သွားပိုးစားနိုင်ခြေကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ဟာ...
ဒိန်ချဉ်၏ အိမ်တွင်း အသုံးဝင်ပုံများ
မီးမိုးမေ ဒိန်ချဉ်မှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေအူလမ်းကြောင်းစနစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒိန်ချဉ်ကို မျက်နှာပေါင်းတင်ရာမှာ၊ နေလောင်ဒဏ်ကုသရာမှာနဲ့ အိမ်မွေးခွေး၊ ကြောင်လေးတွေ အစာမကြေဖြစ်နေချိန်မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း မျက်နှာကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ Spa သွားပြီး အကုန်အကျမခံနိုင်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒိန်ချဉ်နဲ့...
၊ ကိုထက် ၊ ခံတွင်းအနံ့နံတာက ရေသောက်နည်းတာကြောင့်၊ တံတွေးအထွက်နည်းတာကြောင့် ဖြစ်တတ်သလို တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့နံတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းတတ်ပြီး စကားပြောရမှာကိုတောင် စိုးရွံ့နေရတတ်ပါတယ်။ အခုတော့ စိုးရိမ်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ဒိန်ချဉ်သောက်ပေးတာက ခံတွင်းအနံ့နံတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်တာကြောင့် လည်ချောင်းအနောက်ဘက်နဲ့...
၊ ဇွန် ၊ (၁) အစာကြေညက်စေပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်သောက်ရင် ၀မ်းချုပ်တာ၊ ၀မ်းလျှောတာ၊ လေထတာနဲ့ လေချဉ်တက်တာစတဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ (၂) ဆဲလ်အဆင့်မှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၃) ဒိန်ချဉ်ထဲက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားဟာ မှိုစွဲဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။...
အသားအရေအတွက် ဒိန်ချဉ်၏ အသုံးဝင်ပုံ
ဒိန်ချဉ်မှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါဝင်တာ ကြောင့် အစာခြေအူလမ်းကြောင်းစနစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒိန်ချဉ်ကို မျက်နှာပေါင်းတင်ရာမှာနဲ့ နေ လောင်ဒဏ်ကုသရာတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်သုံးပြီး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း မျက်နှာကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ Spa သွား ပြီး အကုန်အကျမခံနိုင်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒိန်ချဉ်နဲ့...
လရိပ်မေ မျက်နှာကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ Spa သွားပြီး အကုန်အကျမခံနိုင်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ပေါင်းတင်လိုက်ပါ။ – မျက်နှာကိုသန့်စင်အောင် ဆေးကြောပြီး ဒိန်ချဉ်အလွတ်ကို မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအနှံ့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာမှ ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းပြီး မျက်နှာကြည် လင်သန့်စင်သွားပါလိမ့်မယ်။ – မျက်နှာတစ်ခုလုံး...